“ရှက်ဖွယ်……………. ရှက်ဖွယ်………………. “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ရှက်ဖွယ်……………. ရှက်ဖွယ်………………. “
“ရှက်ဖွယ်……………. ရှက်ဖွယ်………………. “
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Aug 7, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 27 comments
ဒီနေ့ မနက် စော စော က တည်း က မိုးဖွဲဖွဲကျနေပါတယ်။
အဲတော့ မန်းလေး ထုံးစံအတိုင်း လမ်းပေါ်မှာလူရှင်းပါတယ်။
ကျနော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကပြန်လာတော့ လမ်း ရှင်းတယ်ဆိုပြီး
ဆိုင်ကယ် စီးရင်းဟိုငေး ဒီငေးပေါ့။
အဲဒီအချိန် ကျနော်ရှေ့ကဆိုင်က တစ်စီးက ကျွိ ကနဲဘရိတ်ဆောင့် အုပ်သံ ကို
ကြားလိုက်တော့ကျနော်လဲအမြန် ဘရိတ်အုပ်လိုက်ရပါတယ်။
ကျနော် စီးလာတဲ့ အရှိန်ကလဲ နည်းနည်းမြန်တော့
ကျနော်ရှေ့ က ဆိုင်ကယ် ကိုလှမ်းကြည့် လိုက်တော့
လမ်းပေါ်မှာကျနေတဲ့ ပိုက်ဆံအိပ်လား ဘာလား တစ်ခု ခု ကို
နှစ်ယောက်လုံး က လူ ငယ် အရွယ်။
၀တ်စားထားတာကလဲ ကာတွန်းပုံ ဘောင်းဘီတို နဲ့ တီရှပ်အနွမ်း နဲ့။
သူ တို့ ကလမ်းပေါ်ကျနေတာကိုလဲ ကောက်ပြီး ရော ဆိုင်ကယ်ကို
ဝေါကနဲ မောင်းထွက်ပြေး သွားပါတယ်။
ကျနော် လဲ စိတ် တို တော့ စိတ်ထဲကနေ မေ တ္တာ ပို့တော့ တာ ပေါ့။
လမ်းပေါ်လျောက်သွားနေတာအလုပ်မရှိ အကိုင်မရှိ အကောင်တွေ နေမှာ
ဆိုင်ကယ် ဦးထုပ်လဲ မဆောင်း မိမဆုံးမ ဖ မဆုံးမ စည်းမဲ့ ကမ်းမဲ့ ကောင်တွေနေမှာ
လမ်းပေါ်ကျ နေ တဲ့ သူများ ပစ္စည်းကို ရှေ့ မကြည့် နောက်မကြည့် နဲ့ ဆိုင်ကယ်
ရပ်ပြီးကောက်တာ ငတ်ကြီးကျတွေ နေမှာ
ဆိုင်ကယ်ကိုဝေါ ကနဲမောင်း ထွက် ပြေးတာ သူတို့ ကောက်ရ တာ ငါ မြင်သွားလို့
လို့ တသီ တတန်းကြီးတွေး ရင်း ဆိုင်ကယ်ကို အမြန်စီး ပြီး သူတို့ နောက်ကလိုက်လာပါတယ်။
နောက်အဲဒီနှစ်ယောက်ရော ကျနော် ပါ မီးပွိုင့် မှာ မီး နီ မိ တော့ ရပ် ရ ပါလေရော။
အဲဒီမှာ ကောင်လေး နှစ်ယောက်က “အကိုကြီး အကိုကြီး “ လို့ခေါ်သံကြားလို့ လှည့်အကြည့်
ကျနော်ရှေ့ မှာ ရပ်ထားတဲ့လူ ကို လှမ်းခေါ် တာ ဖြစ် နေပါတယ်။
အဲဒီဆိုင်က ယ် က မုန့် လှည့်ပြီး ပို့ တဲ့ ဆိုင်ကယ်ပါ။
ဆိုင်ကယ်တစ်စီးလုံး မုန့် တွေ့အပြည့်ချိတ်ထားပါတယ်။
“အကိုကြီး ဆိုင်ကယ် ကပြုတ်ကျ တာ မြင် လို့ ကောက်ပြီး ယူလာတာ။
မမှီမှာ စိုးလို့ ဆိုင်ကယ်ကိုဒုန်းမောင်းပြီး လိုက်ရတာ” လို့ပြော ရင်း လိုက်ထဲ မှာ ကိုင်ထားတဲ့
မုန့်ထုပ် သုံးလေးထုပ်ကို ပေး လိုက်ပါတယ်။
မုန့် သမား ကလဲ
“ ကျေး ဇူး ပါ ညီ လေး ရာ မင်း တို့ ကောက်မလာ ရင် အလဟဿဖြစ်သွားမှာ”
သူတို့ကို ကြည့် ရင်းကျနော်ရှက်သွားပါတယ်။
ဘာမှလဲရေ ရေ ရာ ရာ မသိ။
ဘာမှ လဲ မဆင်ခြင်
ဖျပ်ကနဲ မြင်လိုက် သိလိုက်တာလေး ကို ကိုယ် ထင်ရာကိုယ်တွေးပြီး
အခြားသူ ကို သိတတ်စွာနဲ့ ကူ ညီ တဲ့ သူကို မှ အလွယ်တကူ အပြစ်တင် မိ တာကိုးဗျ။
အင်းလောက မှ အဲ လို ရှက်စရာ တွေဘယ်လောက်များ
များ နေမယ် မသိဘူးနော်။
မှားတဲ့အခါလဲ မှားပေမပေါ့ ..
မဝေ နဲ့ ကို ခ ရေ
တစ်ခါ တစ်ခါ ပြန်တွေးကြည့် မိတယ်။
ကျနော်အပါအ၀င်အားလုံးက ဖျပ်ကနဲ့ ဖျပ် က နဲ ဆုံးဖြတ်တာတွေ များများလာသလိုဘဲ။
တစ်ခါတလေ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်ကတော့ အဟုတ်မှတ်ပေမယ့် အခြားတစ်ယောက် အမြင်နဲ့ ပြန်ကြည့်မိရင် ခုန အဟုတ်ထင်ခဲ့တဲ့ အတွေးက အတွေးလွဲပါလားလို့ သိရ တာတွေ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်၊။ ဒါဟာ လူ့ သဘာဝ လားမသိ။
ကျွန်တော်သိချင်တာက လေးပေါက်က ပြေးကောက်တာလား.. ဒါမှမဟုတ်… အတွေးပေါက်တာလား.. အဲဒါလေးဖြေပေးပါ…
စာရေးသူ ဆို တာ
ကိုယ်တိုင် ကြုံ တာ ဖြစ်စေ
သူများကပြော တာ ဖြစ်စေ
ကိုယ်တိုင်ကြား တာ ကို ဖြစ် စေ
ရော သ မ မွှေ တာ မို့
ဟိုမင်းသမီး လေသံ နဲ့ ပြောရ မယ် ဆို ရင်တော့
“အဲ ဘယ် လို ပြော ရ မ လဲ ” လို့သာ ဖြေ ချင် ပါ တယ်
ရေ မြေ သ နင်း ပြည့် ရှင်မင်းရေ
နယူးယောက်မှာ စစ်ချက်တခုက.. မြိ့ထဲလမ်းဘေးပလက်ဖေါင်းမယ်.. မိန်းကလေးတယောက်ကိုယ်တုံးလုံးရပ်နေတာ.. သတိပြုမိတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိသလဲပေါ့..
အလုပ်များတဲ့ရုံးချိန်ဆို.. မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြီးဖြစ်နေတာတောင်.. သတိမပြုမိသူတွေတော်တော်များများရှိသတဲ့..
ဆိုချင်တာက.. လူတွေရဲ့သူတပါးကို Judge လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဟာ.. ကန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်..။
အဲဒီကနေချဲ့တွေးရရင်.. လူတွေရဲ့.. စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေဟာ.. သူ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်..အလုပ်တွေနဲ့.. အဆက်အစပ်ရှိပါတယ်..။
ပုဒ်မ ၄၃၆ထောက်ခံဆန္ဒမဲကောက်နေတုံး.. မန္တလေးအဓိဂရုဏ်ထဖြစ်တာမျိုးဟာ.. အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ.. “ဦးနှောက်မုန်တိုင်းလွှဲ”ပစ်တယ်လို့… ဟူလို…
(နိုင်ငံရေးပြောတာနော.. ကိုပေါက်ကြီးပို့စ်နဲ့.. ဘာမှ.. မဆိုင်.. )
Read more: http://www.gotquestions.org/do-not-judge.html#ixzz39kMSUNZd
ဟီး.. ချစ်လို့ စတာပါ.. ကြိုက်သလိုဖြေပါဗျာ…
ရပါတယ် ရေမြေ့ သနင်းရယ် စိတ်တိုင်းကျ စနိုင်ပါကြောင်း
မနောဆို အမြဲအဲလိုတွေ တွေးမိလို့ သူများကို အားနာရပေါင်းများနေပါပြီ။
မနော ရေး လူစိတ်က ဖျပ်က နဲ့ ဖျက်က နဲ့ မြင် လိုက်တာ ကိုအ မှီလိုက်တွေးတော့ မှား နိုင်ပါတယ်
ပြောမိလိုက်ရင် ရမဲ့ စိတ်မကောင်းမှုက ပိုဆိုးမှာ
အိုး ကို နို ရေ
ပြောမိ လို့ ကတော့ အဆော် ခံ လိုက်ရ မှာသေချာတယ်
ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင် လေးပေါက်လို အဖြစ်မျိုးတွေ ခဏခဏကြုံဖူးတယ်။ အခုအရွယ်ကျပြန်တော့လည်း ကြားသုံးကြား မဝင်မိအောင် မနည်းရှောင်နေရပြန်ရော
ပိုင်လေး က ငယ် တုံးမှာ ရှောင်နိုင်တယ်
ကျနော် က အခု လက်ရှိကို မရှောင် နိုင်သေး
မိဘနဲ့သားသမီး၊ လင်မယား၊ မောင်နှမကြားတွေပေါ့…။
ယူအက်စ်မှာတော့.. ဥပဒေကာကွယ်သူစောင့်ရှောက်သူ.. ရဲတွေက ဘယ်ကြားမဆို.. ၀င်တယ်..။
အိမ်တွင်းမှာ.. တယောက်ကတယောက်ကို အနိုင်ကျင့်နေပြီဆိုရင်.. တခါးလာခေါက်ပြီး.. ဆုံးမတော့တာပဲ..။
ဒီမှာတော့ အဲ လို ဥပ ဒေ ကာကွယ်စောင့် ရှောက်မူ့ မဖွံ့ဖြိုးခဲ့တော့
ရပ် ထဲ ရွာ ထဲမှာ တစ် ခု ခု ဖြစ်ခဲ့ရင်လေး စး ထိုက်သူက ကြား ၀င် လိုက်တာ ပါဘဲ
ဥာဏ်ကြီး သူ ကတော့ ရှောင်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်
ဆရာတက်တိုးကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ပဲ..သံဝေဂ ပြန်ယူရမယ်ဗျို့ .. ။
အရမ်းဘာသာမပြန်နဲ့ …တဲ့ … ။
ကျနော်တို့ဟာ..မြင်တွေ့ ..ကြုံကြိုက်လိုက်တဲ့ ကိစ္စတွေကို…
ဖျတ်ခနဲ… အရမ်း အရမ်း ဘာသာပြန်လို့ မဖြစ်တော့ဘူးဗျို့ .. .။
မှန်တယ် အရမ်းဘာသာပြန်ရင် တလွဲ ဖြစ် တတ် တယ်။
လူ့လောကကြီးထဲမှာ နေ့ စဉ် နေထိုင်ကြရာမှာလဲ
ိကိုယ်သိတာ နည်းနည်းလေးနဲ့ အရမ်းဘာသာပြန်လို့ မ ရ ဘူး အလင်းဆက်ရေ
ဒီလောက်အရှည်ကြီး ရေးတာမှ တွေး စရာ တချို့ဘဲ ရ တယ် ဟုတ် စ
အဲ့ဒါပေါ့လေးပေါက်ရယ် နားလည်မှု့လွဲတယ်ဆိုတာ။ ဒါကတော့ လမ်းမှာတွေ့ရတဲ့ပြသနာမို့ ပြီးသွားတာကိုး။ မဟုတ်ပဲ မိတ်ဆွေ ဆွေမျိုး ကြားမှာဆိုရင် ရန်ပွဲတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ခုတလောအဲ့လိုပြသနာတွေကြုံနေရတယ်။ လေးပေါက်ပြောမှပဲ ငိုချင်လာတယ်
အဲလို ဖြစ် နေ ရင် စိတ်အေးလက်အေး စဉ်း စား ပြီး ဖြေ ရှင်းလိုက်ပါ မယ် သဲ ရေ
ရှင်းနေရတယ်လေးပေါက်ရေ။ အတော်မလွယ်တာနော့ နားလည်မှု့လွဲတာက ရှင်းရအခက်ဆုံးနဲ့တူပါရဲ့
အဲ လို တွေ တွေးတာ အကျင့်လို ဖြစ်သွားရင်လည်း
တွေးရုံတင်က ကိစ္စမရှိ (ကွကိုယ် အပြစ်မတင်ချင်လို့ ဖော့ပေးသည်)
ပါးစပ်ကပါ ပြောမိလိုက်ရင် ပိုရှက်စာကောင်းးးးးး